Ịghọta ụdị dị iche iche nke NT - IntegritySyndicate.com
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ Ịghọta Ọdịiche Agba Ọhụrụ
Akụ na -atụ aro: Agba Ọhụrụ
Clontz, TE, na J. Clontz, eds.
E kere ya karịsịa maka ọmụmụ Bible. Otu n'ime isi ihe dị na ya bụ na a na -enye ihe odide ala ala na ala nke ibe ọ bụla na -ezo aka n'ụdị dị iche iche nke ederede Grik n'ozuzu ekewara n'ime ụzọ abụọ: Otu “Alexandria” na -anọchite anya ihe odide kacha ochie. Otu “Byzantine” na -anọchite anya imirikiti ihe odide. Ọ na -egosikwa obere dị iche iche. N'okpuru ala nke ibe ọ bụla, e nwere otu ngwa ọrụ ederede nke na -egosi nhọrọ ederede nke nsụgharị Bible iri abụọ maka amaokwu ọ bụla nke Agba Ọhụrụ. Agbanyeghị na atụgharịrị site n'ụdị atọ n'ime otu, ntụgharị asụsụ a na-eji Ederede Critical (NA-20) dị ka isi mmalite 27% nke oge a na-agụkwa ya nke ukwuu. (c) Mbipụta Cornerstone, 100, ISBN 2008
Nomenclature dị iche
"Ọ bụ ezie na mbipụta Nestle-Aland 27 Novum Testamentum Graece 1993 abụghịcha ederede" Alexandria ", ọ bụ mbipụta kacha asọpụrụ na nkwekọrịta n'ozuzu ya na ezinụlọ ederede, na" Alx "bụ ndebiri dị mfe iji maka mbipụta a.
Ederede ndị bishọp nke 1904, n'aka nke ọzọ; bụ mbipụta a kacha akwanyere ùgwù na ọdịnala "Byzantine", ma e jiri ndebiri "Byz" mara ya.
Ma Nestle-Aland ma ọ bụ ederede Patriarchal enweghị ike ịnọchite anya ọgụgụ zuru oke dị na ezinụlọ ederede abụọ a na ndị otu pere mpe. Edepụtara ọgụgụ ka ukwuu nke dị iche na ederede Patriarchal n'okpuru ndebiri "Major." Ọgụgụ pere mpe sitere na otu ederede niile - Alexandria, Byzantine, "Western," F1, F13, na ndị ọzọ - ka edepụtara n'okpuru ndebiri "Obere."
Edepụtara ọgụgụ na -esiteghị na isi mmalite Greek n'okpuru ndebiri "Alt". Ọgụ ndị a nwere ike isi na Latin, Syriac, coptic, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ oge ochie. ” (ii)
Alx- Nestle-Aland mbipụta nke 27 Latin, Syriac, copt, ma ọ bụ isi mmalite ndị ọzọ n'ozuzu nkwekọrịta na ihe odide mbụ "Alexandria" (mana ọ bụghị kpamkpam). Otu “Alexandria” na -anọchite anya ihe odide kacha ochie.
Byz - Ihe odide nna ochie nke 1904, mbipụta a na -akwanyere ùgwù na Omenala "Byzantine". Otu "Byzantine" na -anọchite anya imirikiti ihe odide sitere na narị afọ niile.
Isi - Ọgụgụ ka ukwuu nke dị iche na Ederede ndị bishọp
Nta - Ọgụgụ pere mpe sitere na otu ederede niile - Alexandria, Byzantine, "Western," F1, F13, na ndị ọzọ
Alt - Latin, Syriac, copt, ma ọ bụ isi mmalite ndị ọzọ